Shiinaha Tungsten Carbide strips Warshadaynta iyo Warshad | NCC
Daaweynta dusha sare: Maran ama Dhul
Astaamaha Tungsten Carbide Strips
Xaraashyada carbide waxay leeyihiin waqti dheer oo adag, adayg sarreeya, iska caabin wanaagsan oo xirxira, modul laastik ah, xoog isdabarin, xasiloonida kiimikada wanaagsan (aashitada, alkaliska, qiiqa heerkulka sare). Waxyaabaha kiimikada ee xariiqyada carbide tungsten waa kuwo xasilloon, sidoo kale saameynta adkaanta & isugeynta isku dheelitirka ayaa hooseysa.
Waa shey aad u fiican in la soo saaro qaybaha iska caabiya heerkulka sare & daxalka. Sidoo kale, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa sida qaybo xiran iyo qaybo gaashaan. Waxaan ku siineynaa xargaha carbide tungsten oo tayo sare leh, oo kor u qaadi kara wax soo saarkaaga isla markaana kuu badbaadin kara qiimahaaga.
Noocyada carbide tungsten
1. adkaansho badan
2. Nabaro badan iyo u adkeysashada daxalka.
3. Cadaadiska cadaadiska sare
4. Caabbinta heerkulka sare
5. Alaabooyin leh qalab casri ah iyo shaqo hagaagsan
Xajmiga taarikada carbide
In ka badan 50 sano wax soo saar iyo khibrad maamul technology Tiknoolajiyad wax soo saar horumarsan, Mashiinno sax sare leh, Nidaam maareyn adag oo QC ah, Sanduuqyo iyo tuubooyin wax lagu rakibo oo Qaas ah, Hababka kala duwan ee maraakiibta
1.Tungsten carbide wax soo saar maran
Wax soo saarka carbide ee tayada wanaagsan wuxuu ku tiirsan yahay 100% alaab ceeriin oo bikro ah iyo qashin-qodid heer sare ah, mashiinno riixaya iyo foornooyinka dabka lagu shito. Waxaan xoogga saareynaa geeddi-socod kasta oo wax soo saar ah oo ka mid ah meelaha bannaanka yaal. Si loo ilaaliyo tayada wanaagsan ee carbide blanks waa salka qalabka mashiinka sare ee si buuxda loo dhammeeyay.
Habka baaritaanka iyo baaritaanka
Si loo hubiyo tayada dhammaan badeecooyinkayaga tungsten carbide dhammeeyay, nidaam maareyn adag oo QC ah oo aan ugu magac darnay "Xarunta Xakamaynta Tayada" ayaa la soo saaray. Qalabkayaga kormeerka sare iyo kormeerayaashayaga xirfadleyda ah, waxaan awoodnaa inaan sameyno kormeerka alaabta ceyriinka ah, kormeerka goobta iyo ka dib dhammeystirka kormeerka si loo hubiyo 100% tayada wanaagsan ee alaabadaada carbide.
Qalabka CNC oo sareeya
NCC waxay leedahay taxane mashiinno shiidan oo taxaddar sare leh, oo ay ku jiraan mashiinno wax lagu shiido oo fidsan, OD iyo mashiinno aqoonsi, Makiinado wax shiida oo aan lahayn Xarun iyo mashiinno wax lagu shiido oo habeysan. Sidoo kale waxaan leenahay mashiinada CNC, EDM, mashiinada jarista fiilooyinka iyo mashiinada qoditaanka iwm. Iyadoo shaqaalaheena xirfadleyda ah, aan xakameyn karno saxsanaanta aadka u saraysa ee qayb kasta oo carbide ah.
4.Bakhshadda iyo rarka
Sanduuqyada wax lagu duubo ee sida gaarka ah loo qorsheeyay iyo tuubooyinka ayaa si habboon loogu isticmaali doonaa alaabada carbide ee caadiga ah iyo kuwa la habeeyay si loo hubiyo badqabka badeecadaha inta lagu guda jiro geeddi-socodka gaadiidka. Siyaabo kala duwan oo rar ah ayaa loo heli karaa shixnadahaaga, tusaale ahaan waxaan ku rari karnaa alaab Badda, hawada iyo shirkadaha Express sida DHL / FedEx / UPS / TNT iwm.
Xiga: Tungsten Carbide Ulaha leh godka Coolant
Tungsten Carbide Wear Strips Stress
Xadhiga Carbide Cemented Threading PVD daahan ...
Qalabka Carbide, Dhuxulada Dhamaadka Carbide Solid, Cemented Carbide Endmill, Mashiinka Mashiinka, Carbide Cemented, Qalabka Jarista Carbide,